Godaantota Itoophiyaa mana hidhaa Sawudi Arabiyaa jiran
"Ji'a Jahaf, kutaa tokko keessatti nama 360 taanee hidhamnee jira"
Godaantonni Itoophiyaa weerara vaayrasii koronaatiin wal-qabate, gara ji’a jahaa dura humnoota Saawduii Arabiyaatin “biyyatti deebifamtan” jedhamanii mana hidhaatti galfaman rakkoo hamaa keessa jiraachuu himatan.
Mana hidhaa Jizan jedhamu keessa jiraachu VOA-f an ibsan godaantonni Roobii darbe dubbisne akka jedhanitti haallii bakka jiranii hamaa ta’uurraa dhukkubaaf saaxilamuu fi kanneen biraa lubbuun darbe jiraachuu dubbatan.
Dargaggoon Oromiyaa irraa oggota jaha dura gara Yaman imaluu fi ji’oota jahaan dura humnoota Saawudii Arabiyaatiin naannoo daangaa biyyoota lamaanii irratti godaantota dhibban lakkaawwamn kaan wajjin qabamuu dubbatu fi amma mana hidhaa Sawudii jiru VOAf akka ibsetti mana tokko keessatti godaantoota 360 hidhamee jira. “Nyaataa fi dhugaatiin argannu gahaa miti,” an jedhu dargaggoon kun dabalees, sababa hanqina qilleensaa fi manni fincaaniis achuma bakka hidhaman keessa ta’uudhan wal-qabatee qulqullinni dhabamuun namoota baayyee dhukubaaf saaxiluu ibsa.
Lammiiwwan Itoophiyaa mana hidhaa godaantotaa Jazan keessa jiran
Viidiyoo akka agarsiisutti mana hiphaa keessaa dargaggoonni baayyen mudhiidhaa ol qullaa, marxoo ofirra godhanii tataa’an, kaan cisiisaniiru. Oo’i isaa akka malee ta’uu himatan. Dargaggoon biraan dubbise, ji’oota jahan darbaniif uffata akka in uffatinii dubbata.
Mana hidhaa kun sababa an godaantotaaf qophaahe ta’eefii an yakkamtootaa in ta’iniif bilibila fayyadamuun ni heyyamamaaf. Amma garuu, “erga odeeffannoon haala keessa jiruu midiyaaleen gabaafamuu jalqabee as bilbilallee nurraa guuruuf karorfameera,” jedhan godaantonni kun.
Dargaggoon dubbise lamaanuu hiriyoota isaanii manneen hidhaa walfakkaaan nannoo san jiran keessa jiran wajjin bilbilaan quba walqabaachaa turuu, kanneen keessaa dubartoonillee hedduu ta'uu dubbatu.
"Godaantonni kanaan dura hidhaman dafanii biyyatti galfamaa turan," an jedhan lamiileen Itoophiyaa kun dhimmi isaanii maalif yeroo dheeraa akka fudhate gaafii itti ta’uu ibsanii fedhiin isaanii guddan biyyatt deebifamuu akka ta’e jabeessanii himatan.
Minsitra Haajaa Alaa Itoophiyaa, Obboo Gadduu Andaargaachoo (Suuraa faayilii)
Ministirri Haajaa Alaa Itoophiyaa dhimma godaantota Itoophiyaa Sawudi Arabiyaa jiraanii laalchise ibsa Kamisa Kaleessaa, jechuunis Fulbaana 3 baaseen, “ mootummaan hoomuu taanaan lammiiwwan ofii biyyoota alaa jiran galchuu didee in beekuu,” jedha. Bara kana ji’a Bitootessaa fi Caamsaa edduutti godaantota kuma 400 gara biyyaa deebiseeraa jedhee, Kunis an godhamu qajeelfamootaa fi human jiru iirratti hundahee ta’uu ibsa.
Hojiin godaantota gara biyyaa deebisuu, qaamotaa fi waajiraalee mootummaa dhimmi kun laallattu hundaan qindoominaan hojjatama an jedhu ibsi Ministira Haajaa Alaa Itoophiyaa kun godaantooni lammii Itoophiyaa ta’uu mirkaneessuudhaa qabee hojiiwwan godaantota gara biyyaa deebisuun dura hojjataman tarreessa.
Weerara vaayrasii koronaan walqabatees, hoggantoonni Sawudi lakkoofsi godaantota Itoophiyaa dangaa cehan dabalaa dhufuu nu beeksisaa jiran an jehdu ibsichi. Yeroo ammaa kanas Godaantota 2,000 ji’a fulbaanaa fi Onkoloolessaa biyyatti deebisuf karoorfamuu ibsuudhan, qarqaarsa mootumman Sawudii Arabiyaa godaantota kanaaf godhu galateeffata, ibsichi.
Mootumman Itoophiyaa kanneen seeran ala namoonni akka godaanan hojjatan, dalaalotaa fi yakkamtoota to’’achuu, akkasumas haala dangaa jabeessuu irratti hojii qubsaa akka in hojjannes jedha.
Kanumaan wal-qabtee itti aanaa pirezdaantiin bulchiinsa naannoo Tigray Dr. Debretsion Gebremikaa’’l dhalattoota Tigraay mana hidhaa Sawudi Arabiyaa jiran biyyatti deebisuf naannon isaanii fedhii qabachuu fi mootummaan Saudi hoo ergeef buufata Xiyyaaraa naannoo Tiraay jirutti simachuuf qophii ta’uu ibsuudhan xalayaa yeroo lama mootii Sawudiitif erguu fi amma ammatti deebi akka in argatiin naanichi beeksiseera.
Haawwanii fi Qarreewwan Hiriira Mormii Ba'anii Jiru
Pireezidaantii Naannoo Gaambeellaa Irratti Yaaliin Ajjeechaa Taasifame Jedhe, Poolisiin
Hoogganoonni ABO fi Kanneen Waliin Hidhaa Jiran Biroon Beellama Mana-murtiitti Hin Dhiheeffamiin Hafan
Prezidaant Traamp Kinooshaa Daawwachuuf Jiru
Ripaablikaanonni Doonaald Traampiin Marsaa Lammataaf prezidaantii Akka Ta'aniif Kaadhiman
Manni-murtii Jawaar Mohammad fi Himatamtoota Kaan Irratti Ragaa Dhaggeeffachuu Itti Fufe
Lagi Awaashii fi Haroon Qooqaa Guutee Lola'uun Namoota Gara 20,000 Qe'ee Buqqaase
Karoora Misoomaa fi Hedduumiina Lakkoofsa Uummataa
Walgahii Mana Maree Federeshinitti Hin Hirmaannu: Bulchiinsa Naannoo Tigraay
Godinaalen Yunaayitid Isteetis Talaallii Vaayrasii Koronaa Sadaasa Tokko Rabsuufi Akka Qophahan Itti Himame
Yunivarsiitiin Wallaggaa Afaan Oromootiin Barattoota Digirii PHDn Eebbisiise
Waa’ee Hidhaadhaa Hiikamuu Guyyoo Waariyoo Abukaatoon Isaanii Maal Jedhan?
Lagi Awaashii fi Haroon Basaqaa Guutuu Jiraattota Naannoo Kuma Hedduu Qehee Irraa Buqqise